Miriam Ellis Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Maryan Ellis
Miriam Ellis waa qeyb ka mid ah Moz Local kooxda. Markii aysan qorin warsidaha billaha ah ee maxalliga ah ee Moz isla markaana ay ka jawaabto su'aalaha ku jira golaha su'aalaha iyo jawaabaha, waxay ka caawineysaa macaamiisheeda inay bartaan istaraatiijiyaddooda 'SEO Local' ee shirkaddeeda u gaarka ah Naqshadeynta Webka ee Solas.
Dukaanleyda Feejignaanta: Tafaariiqda waxay kasbataa dib u eegisyo ka badan maqaayadaha Yelp
Talaado, Janaayo 31, 2017 Sabtida, Oktoobar 20, 2018 Maryan Ellis
Waxaad maqleysaa TripAdvisor, waxaad u maleyneysaa hudheelo. Waxaad maqleysaa Healthgrades, waxaad u maleyneysaa dhakhaatiir. Waad maqleysaa Yelp, fursadahana way wanaagsan yihiin inaad u maleyso makhaayadaha. Taasi waa sida saxda ah sababta ay lama filaan ugu tahay milkiileyaasha ganacsiyada maxalliga ah iyo kuwa wax iibiya inay akhriyaan tirakoobka u gaarka ah Yelp oo sheegaya in, ka mid ah 115 milyan ee dib u eegista macaamiisha ee Yelpers ay ka tagtay tan iyo markii la bilaabay, 22% waxay la xiriirtaa dukaamaysiga iyo 18% ee la xiriira maqaayadaha. Sumcadda tafaariiqda, markaa, ayaa ka dhigaysa qaybta ugu weyn ee
4 Ganacsi oo khalad ah ayaa sameeynaya taas oo dhaawaceysa SEO-ga maxaliga ah
Talaado, Agoosto 23, 2016 Jimcaha, Sebtember 14, 2018 Maryan Ellis
Isbeddelo waaweyn ayaa ka socda raadinta maxalliga ah, oo ay ku jiraan meeleynta Google ee 3 xayeysiis oo kor u sii riixaya xirmooyinka maxalliga ah iyo ku dhawaaqida in xirmooyinka maxalliga ah ay dhowaan ku jiri doonaan gelitaan lacag leh. Intaa waxaa sii dheer, bandhigyada moobiilka ee cidhiidhiga ah, badashada barnaamijyada, iyo raadinta codka ayaa dhammaantood gacan ka geysanaya tartanka sii kordhaya ee muuqaalka, iyagoo tilmaamaya mustaqbalka raadinta maxalliga ah ee isku darka kala duwanaanta iyo suuqgeynta suuqyadu ay noqon doonaan baahiyo aan jirin. Haddana, ganacsiyo badan ayaa sameyn doona